Ngwongwo na-ekpo ọkụ na-emepụta Nyocha nke induction igwe kpo oku
Home / Mkpụrụ Ejiri Ọkụ / Itinye n'ọkwa Heating Coils Design
Mkpụrụ Eji Eji Eji Eke Eke
Category: Mkpụrụ Ejiri Ọkụ Tags: braduu codu induction, eriri induction, imewe coils imewe, induction kpo oku, induction kpo oku, ntinye agbaze igwe, itinye aka na ịgbado ọkụ coils, imewe inductor, nhazi
N'agbanyeghị ụdị, ogo, ma ọ bụ ụdị ntinye ị chọrọ, anyị nwere ike inyere gị aka! Ndị a bụ ole na ole n'ime ọtụtụ narị ihe eji arụ ọrụ anyị. Pancake coils, heical coils, concenters coils… square, round and rectangular tub… Single-turn, ise-turn, iri na abụọ-uzo… n'okpuru 0.10 ″ ID karịrị 5 'ID… maka esịtidem ma ọ bụ mpụga kpo oku. Ihe ọ bụla ị chọrọ, zitere anyị ihe osise na nkọwapụta gị maka nkwupụta okwu ozugbo. Ọ bụrụ na ị bụ ihe ọhụrụ iji kpoo ọkụ ọkụ, zitere anyị akụkụ gị maka nyocha n'efu.
N'ikwu ya, a na-ewu mgbidi maka imepụta ọkụ ọkụ n'elu nnukwu ụlọ ahịa nke data mgbakasị nke mmepe ya sitere n'ọtụtụ ngwa ngwa dị iche iche dịka dịka
na solenoid coil. N'ihi nke a, ejiji mkpuchi na-adabere na ahụmịhe.
Usoro isiokwu a na-atụle nlebara anya eletriki dị iche iche na nhazi nke nhazi na-akọwa ụfọdụ n'ime ígwè ndị kachasị eji eme ihe.
Atụmatụ imepụta ihe
Onye na-arụ ọrụ dị ka onye na-agbanwe transformer bụ isi, ihe arụ ọrụ ahụ bụkwa otu
na transformer nke abụọ (Fig.1). Ya mere, ọtụtụ n'ime àgwà
nke ndị na-agbanwe agbanwe bara uru na mmepe nke ụkpụrụ nduzi maka imewe mkpuchi. Otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ndị na-agbanwe agbanwe bụ eziokwu na arụmọrụ
nke njikọ n'etiti windings bụ n'ụzọ dịgasị iche iche na akụkụ nke dị anya n'etiti ha. Ọzọkwa, ihe dị ugbu a na isi nke transformer, nke ọnụ ọgụgụ nke isi ntụgharị, dị ka nke dị ugbu a na nke abụọ, nke ọnụ ọgụgụ ahụ mụbara nke nke abụọ. N'ihi mmekọrịta ndị a, enwere ọnọdụ dị iche iche nke a ga-eburu n'uche mgbe ị na-emepụta ihe ọ bụla
induction kpo oku:
1) A ga-ejikọta ihe mkpuchi ahụ na akụkụ ya dịka o kwere mee maka kafefe ike. Ọ bụ ihe na-achọsi ike ka ọnụ ọgụgụ kachasị dị ukwuu nke ọnụọgụ ndị na-eme ka magneti na-emegharị ihe ndị a na-arụ na mpaghara ahụ. Ọnụ ọgụgụ dị omimi na ebe a, nke dị elu ga-abụ ihe emepụtara ugbu a n'akụkụ.
2) Ọnụ ọgụgụ kasịnụ nke usoro mmụgharị na windo nke solenoid na-eche ihu n'etiti eriri. A na-etinye uche na ndepụta ndị ahụ
n'ime ihe mkpuchi ahụ, na-enye ọtụtụ ọnụego oku n'ebe ahụ.
3) Ebe ọ bụ na mmiri a na-etinyekarị nso na windo ahụ na-agbanye onwe ya ma na-ebelata ha, mpaghara nke geometric nke uzo ahụ bụ ụzọ na-adịghị ike. Ya mere, ma ọ bụrụ na a ga-etinye akụkụ ya n'ime ụlọ ọrụ ahụ, ebe dị nso na ntụgharị igwegharị ga-eme ka ọnụọgụgụ nke ọnụọgụ dị elu karị, ya mere ọ ga-ewe iwe ọkụ na ọnụ ọgụgụ dị elu, ebe mpaghara nke
akụkụ nke obere njikọ ga-ewe iwe dị ntakịrị; E gosipụtara ihe ngosi na-apụta na Fig. 2. A na-akpọkwu mmetụta a n'ogologo ugboro ugboro.
Ntughari ihe nkedo na nkpocha
induction kpo oku oku
Mkpụrụ Obi Brazing
Mkpụrụ Na-agbanwe Ịgbanwe Nye PWHT Inwe Welding